I-HGH Thailand - funda kabanzi mayelana ne-hormone yokukhula eBangkok
I-hormone yokukhula (i-hormone yokukhula, GH, HGH, somatotropin, somatropin) - i-hormone ye-peptide ye-pituitary yangaphakathi, esetshenziselwa ezemidlalo ukubunjwa kwemisipha. I-hormone yokukhula noma i-somatotropin (evela ku-Latin soma-body) inegama layo kulabo bantu abasha, kubangela ukusheshiswa okuphawulekayo okuhambisana (ngobude). Ukukhula kwakubangelwa ukukhula kwamathambo amade omzimba.
I-concentrations yokuqala ye-hormone yokukhula egazini yi-1-5 Ng / ml, kanti izintaba zingase ziphakame ku-10-20 ngisho naku-45 ng / ml. Kwakuqala ukuhlukaniswa ku-1956. Imfihlo ye-hormone yokukhula e-pituitary gland ekuphenduleni izimpawu ezivela kwi-hypothalamus. Ngokuvamile, ngemva kweminyaka engamashumi amabili, ukukhiqizwa kwaleli hormone ngomzimba kunciphisa. Inqubo yokuguga ihlobene ngokuqondile nesilinganiso sokukhululwa kwe-hormone yokukhula. Ngokwesilinganiso, ngemuva kweminyaka engu-20, yonke iminyaka engu-10 izinga lokukhiqiza lihlaselwa yi-15%.
I-hormone yokukhula ayikho umehluko wobulili. Yilokho, izinga lalo lilingana nabesilisa nabesifazane. Naphezu kokuthi ukusetshenziswa kwamalungiselelo aqukethe i-hormone yokukhula, ivinjelwe i-VADO (i-World Anti-Doping Organization), HGH amalungiselelo ayatholakala e Thailand.
Izakhiwo zomzimba ze-HGH:
- Impumelelo ye-Anabolic - ibangela ukukhula komzimba
- Isenzo esiphikisana namagciwane - sivimbela ukuphazamiseka kwemisipha
- Kunciphisa amafutha omzimba
- Ithuthukisa ukusetshenziswa kwamandla
- Kuqala ukuphulukisa
- Inomphumela wokuvuselela
- Kuvuselela ukukhula kabusha kwezitho zangaphakathi (ezithintekayo ubudala)
- Kubangela ukukhula kwethambo nokwandisa ukukhula kubantu abasha kuze kube yiminyaka eyi-26 (kuze kuvalwe izindawo zokukhula), kuqinisa amathambo
- Ukwandisa izinga le-glucose egazini
- Kuqinisa isimiso somzimba
Eminye yemiphumela umuthi uyazibangela, kodwa ingxenye enkulu yemiphumela yayo ihlotshaniswa ne-insulin-efana ne-growth IGF-1 (ngaphambilini yayibizwa ngokuthi i-somatomedin C), eyenziwa yi-action hormone yokukhula esibindi futhi ivuselela ukukhula kwezitho zangaphakathi eziningi. Cishe yonke imiphumela ye-hormone yokukhula ezemidlalo ehambisana nesenzo se-IGF-1.
Izinguquko ezihlobene nobudala ekucineni kwe-hormone yokukhula
Ukwehliswa kwe-hormone yokukhula kancane kancane kunciphisa iminyaka. Kuyinto encane kulabo asebekhulile, abaye banciphisa njengendlela eyisisekelo, kanye nokuvama nokuphakama kwezingqimba zokufihla. Izinga eliyisisekelo sokudonswa kwe-hormone likhulu kakhulu ekuntwaneni kwasekuqaleni, ukuphakama kwe-amplitude kwesibalo esiphezulu phakathi nenkathi ye-teenagehood ukukhula okusheshayo okulinganayo kanye nangesikhathi sokuthomba. Izinga le-circadian ekusithekeni kwe-hormone yokukhula:
Ukwehliswa kwe-hormone yokukhula kanye namanye ama-hormone amaningi ayenzeka ngezikhathi ezithile futhi anezintaba eziningana phakathi nosuku (ngokuvamile ukufihla okukhulu kunamahora onke we-3-5). Inani eliphakeme kakhulu libhekwa ebusuku, cishe ihora ngemva kokulala.
I-hormone yokukhula ekwakheni umzimba eThailand
Okokuqala, amalungiselelo okukhula kwe-hormone aqala ukusetshenziselwa injongo yezokwelapha, nokho, cishe ngesikhathi esifanayo le hormone yayisakazeke ezemidlalo, ngenxa yokuthi ikhono layo lokukhulisa ubunzima be-muscle nokunciphisa amanoni omzimba. Ukulungiswa kokuqala kwe-HGH kwakuyizidumbu ze-pituitary, kanti kuphela ku-1981 yenziwa isidakamizwa somutotropin esivela kabusha.
Ku-1989, i-hormone yokukhula ye-bovine ivinjelwe iKomidi le-Olimpiki. Naphezu kokuthi ukusetshenziswa kwe-hormone yokukhula ngokwezinhloso zezemidlalo kuvinjelwe, kule minyaka eyishumi edlule, ukudayiswa kwezidakamizwa kwande izikhathi eziningi. Ngokuyinhloko, i-hormone yokukhula esetshenziselwa ezemidlalo, ikakhulukazi ekwakheni umzimba, lapho ihlangene nezinye izidakamizwa ze-anabolic.
Ukwandisa umfutho we-muscle oqinile nokushisa kwamafutha
Isizathu esiyinhloko sokwamukelwa kwe-HGH ezemidlalo yikhono lokunciphisa inani lamafutha angaphansi. Ngaphezu kwalokho, ucwaningo luye lwabonisa ukuthi ukuthatha i-hormone yokukhula kuholela ekukhuleni kwemisipha ekhulayo, izicubu ezixhumeneyo nokwandisa ivolumu yamangqamuzana amisipha ngenxa yokuqoqwa kwamanzi.
Omunye umphumela owusizo we-hormone yokukhula - wehlisa imvamisa yokulimala. Lokhu kubangelwa ikhono layo lokuqinisa amathambo namaxhumano (amathanga, i-cartilage) izicubu. I-hormone yokukhula iyasheshisa ukuphulukiswa nokuvuselelwa kwezicubu ngemuva kokulimala.
Kumele kuqashelwe ukuthi ukusetshenziswa kwe-HGH ekusebenzeni amandla kwe-powerlifting akusizi ngalutho, ngoba ekuhlolweni kwatholakala ukuthi ayikhulise ukusebenza komandla. I-Somatotropin ibuye ikhulise amandla nokusebenza, futhi ngokuphambene nalokho, ukwehla emkhawulweni wokukhathala nokunciphisa ukubuyiswa, ngakho-ke i-hormone yokukhula ayinalutho kubadlali bezemidlalo, lapho lezi zinkomba.
Isiphetho esiphezulu ukuthi i-hormone yokukhula ingasetshenziswa ezemidlalo ngenhloso yokuthola usizo.
ukuphumelela okuphezulu, ukukhubazeka okuphansi kwemiphumela emibi, lesi sidakamizwa asithinti umsebenzi we-penis futhi amandla angabangeli imiphumela ye-androgenic futhi ayidingi i-PCT ngemuva kwesilinganiso senyanga isisindo esiphezulu sanda kancane (3-4 kg), futhi kwezinye izimo azishintshi ngokuphelele zihambisana nokulahlekelwa okukhulu kwamafutha.
izindleko eziphezulu zezidakamizwa ziphathelene ne-2-3 eyizinkulungwane zamaRandi ayizinkulungwane.
Imiphumela emibi ye-hormone yokukhula komuntu
Ngenxa yokuthi i-HGH ikhiqizwa ngokwemvelo emzimbeni womuntu, imiphumela emibi ye-HGH ayidabuli. Imiphumela emibi ivela ikakhulukazi kulawo maso lapho uHormone yokukhula isetshenziselwa ukulinganisa okwedlula ukwedluliselwa kanye nesikhathi eside kunalokho okushiwo ochwepheshe. Ngokwenzayo, kunemiphumela emibi elandelayo yokukhula komuntu iHormone (imvamisa yesenzakalo):
I-tunnel syndrome ibonakaliswa ubuhlungu nobuchopho emikhawulweni. Lokhu kubangelwa ukuthi inani elikhulayo lemisipha licindezela izinzwa ze-peripheral. Lo mphumela ohlangothini awuyingozi futhi uxazululwa ngokushesha ngemuva kokunciphisa umthamo.
Ukuqoqwa kohlobo olusetshenziselwa uketshezi, kungabi nomphumela ohlangothini, ngoba ukuqoqwa kwamanzi kusemisipha, kubanika usayizi omkhulu nokuqina. Ngo-Jikelele, isimo esincane sokutholwa ngemuva kokuphela kwenkambo.
Umfutho wegazi ophakeme - ususwe ngokunciphisa inani leHGH, noma ukusetshenziswa kwezidakamizwa ezinamandla.
Ukuvinjelwa komsebenzi we-gland yegciwane - yi-subjective ayibonakali ngokwayo, ngoba ukucindezelwa kuphansi kakhulu. Ukuqedwa kwayo nokwandisa ukusebenza komjikelezo kusetshenziswa iTroroxin ngesilinganiso se-25 mcg ngosuku. Ngemuva kokuyeka ukusebenza kwe-hormone yokukhula, umsebenzi we-thyroid uvuselelwe ngokugcwele.
I-Hyperglycemia - ukwanda kwezinga le-glucose egazini. Ukuqeda i-insulini noma izidakamizwa ezikhuthaza ama-pancreas (gliclazide). Ngokuvamile akudingi izinyathelo ezingeziwe futhi uguquke ngokugcwele. Ungathatha futhi izithako nge-alpha lipoic acid, ubuyisela ukuzwela kwe-insulin.
I-Acromegaly - lesi sifo senziwa ngenxa yokuhlukunyezwa kwezidakamizwa ze-hormone yokukhula. Uma isetshenziswe kahle, ayitholakali.
Ukuphefumula kwenhliziyo nezinye izitho kwenzeka kuphela uma kwenzeka ukusetshenziswa kweHGH isikhathi eside ngamazinga amakhulu. Uma isetshenziswe kahle, ayitholakali.
Imiphumela emibi yenganekwane ye-hormone yokukhula
Ukwanda kwesisu - kukholelwa kakhulu ukuthi i-hormone yokukhula ingakhuphula isisu ngenxa ye-hyperplasia yezitho zangaphakathi (njengoba amathumbu namalungu anemitholampilo ye-IGF-1). Okwamanje akukho bufakazi besayense baleqiniso, noma kunjalo, izibonelo ezimangalisayo zenguquko zesisu emvelweni wabasebenzi bomzimba abaqeqeshiwe abathintekayo. Kodwa-ke, isipiliyoni esiwusizo sabadlali abaningi sibonisa ukuthi izifundo zakudala ze-hormone yokukhula azikho ekuholeni kwesisu. Ochwepheshe bakholelwa ukuthi ukwandiswa kwesisu (kuyi-Internet ye-English evamile igama elithi "GH gut") kunemiphumela yamakhemikhali amaningana emvelo futhi kungenzeka uma usebenzisa amanani amakhulu we-GH kuhlanganiswe ne-insulin, i-steroids, kanye nokusetshenziswa kwamanani amakhulu kokudla.
Impact kwi-potency kanye nomsebenzi we-penis - I-HGH ayinaso umthelela omubi emsebenzini wezocansi.
Ukunciphisa ukuzivikela kokwakheka kwe-hormone yokukhula - uProfesa Elmer M. Cranton, MD uqhube isifundo ngeziguli ezingaphezu kwe-100, engazange itholakale igweme ukuvimba kwayo.
I-Cancer - i-hormone yokukhula ibangela ukusheshisa okuphawulekayo kokuhlukaniswa kwamangqamuzana omzimba, ngakho abacwaningi bakhathazeke ngokuthi i-hormone yokukhula ibe yimisipha. Kwakukhona ukutadisha okuphindaphindiwe, okwakukhona kubantu abaphathwa nge-hormone yokukhula, imvamisa yezinqubo ze-neoplastic abazibonakali ngokuhluke kakhulu kubantu bonke abangakhuluma ngokungabikho kwemiphumela ye-carcinogenic ye-hormone yokukhula.
Isiphetho esijwayelekile mayelana nemiphumela emibi
I-hormone yokukhula ayivami ukudala imiphumela emibi uma isetshenziselwa ukulinganisa okulinganiselwe. Cishe yonke imiphumela emibi iyabuyiselwa. Ngesikhathi esifanayo, kwacaca ukuthi ukulungiswa kwe-HGH kungavuselela umzimba ukuze kuthuthukiswe ukuqina komzimba, kunciphise i-cholesterol embi, kuthuthukise isikhumba, kuqinise amathambo kanye nemigudu kanye neminye imiphumela emihle.
Ama-stimulator of hormone yokukhula
I-regulators esemqoka yokuvimbela i-hormone yokukhula - ama-hormone e-peptide we-hypothalamus (i-somatostatin ne-somatoliberin), efihliwe yi-neurosecretory amangqamuzana e-hypothalamus emithanjeni ye-portal ye-pituitary futhi enza ngokuqondile kwi-somatotrope. Kodwa-ke, ukulingana kwama-hormone futhi ekusithekeni kwe-hormone yokukhula kuthinteka yizici eziningi zokuphila. Ososayensi baye bafakazela ukuthi izinga lokuvimbela i-hormone yokukhula lingakhutshwa ngezikhathi ze-3-5, ngaphandle kokusebenzisa izindlela ze-hormonal.
I-Peptides yizona ezishukumisayo kunazo zonke zokugqugquzela i-hormone yokukhula, ukwandisa izikhathi ezimbalwa ze-7-15 izindleko zeklasi elilinganayo izikhathi eziningana ngezansi:
I-HGH Frag (176-191) - i-fragment
I-hormone yokukhula nama-peptide ekwakheni umzimba
Peptides (kusuka kulesiGreki. - ukondla) - umndeni wezinto ezinamakhemikhali akhe akhiwe ngamanqamuzana e-α-amino acids axhunyiwe ku-chain peptide (amide) izibopho. Ziyinkimbinkimbi yemvelo noma yokwenziwa okuqukethe amashumi, amakhulu noma izinkulungwane zama unit Monomeric - amino acid. Leli klasi lihluke kakhulu futhi lisebenza emzimbeni imisebenzi ehlukahlukene yokulawula. Kulesi sihloko sizocabangela kuphela lawo ma-peptide asetshenziswa ezemidlalo ukulungiswa kwezinkomba zomzimba.
Okwamanje emakethe Thailand ngokuphindaphindiwe kukhona ama-peptide, okuyizinto ezikhuthaza ukukhula kwe-hormone. Ama-peptide athandwa kakhulu ekuqiniseni umzimba eThailand:
Kusuka eqenjini leGhrelin (GHRP): (yakha imfucumfucu ye-GR enkulu emva kokujova, kungakhathaliseki ukuthi isikhathi sosuku nokuba khona kwe-somatostatin egazini).
Kusukela eqenjini lokukhula kweHormone ekhishwa i-hormone (GHRH): (isingeniso emzimbeni kubangela ukwanda okwenziwe umvuthwandaba okuzobe buthakathaka emahoreni lapho ukugcinwa kwemvelo kwe-GRS kuncishiswa yi-somatostatin, futhi kuphakeme ngesikhathi semvelo ukwandisa ukuhlushwa kwe-GR (isib. ebusuku). Ngamanye amazwi i-GHRH ikhulisa ukugcinwa kwe-GRS, ngaphandle kokuphazamisa ijika lezinqubo zemvelo.)
I-GRF (1-29) i-Sermorelin
I-HGH Frag (176-191) iyingxenye ye-hormone yokukhula (i-fat burner)
Kuphakama imibuzo eminingi, kungani usebenzise i-peptide substance, uma kukhona i-hormone yokukhula yabantu? Impendulo ilula: ama-peptide stimulants anezinzuzo eziningana eziphoqelela.
I-Peptides iyabiza kakhulu kune-hormone yokukhula. Izindleko zendlela efanayo zizophindwa izikhathi eziningana.
Izindlela ezehlukene zesenzo nesigamu-izimpilo zisisiza ukuba sisebenzise ijika lokugxilisa impendulo ye-anabolic enhle.
Imithelela ehlukene ekulaleni nasekusetshenzisweni kwemithi, ikuvumela ukuthi ukhethe okunye noma ezinye izinto.
Okwamanje ukukhiqizwa nokusatshalaliswa kwama-peptide akulawulwa umthetho, ngakho-ke kuphephile ukulandelana kwikhompyutha.
Ukuqedwa ngokushesha futhi ngokuphelele, ngakho-ke akukho ukwesaba ukulawula i-doping.
Ama-peptides, kanye ne-classic hormone yokukhula kulula ukuhlola ubuqiniso. Kwanele ukudlula izivivinyo ezingeni le-somatotropin e-plasma ngemuva kokuphathwa kwezidakamizwa.
Ukuze uvumelane nalezi zifundo ukukhula kwe-hormone?
I-hormone yokukhula ingasetshenziswa kokubili amadoda nabesifazane ngaphezu kweminyaka yobudala be-20 (abantu abasha abangase bazwe ukuthuthukiswa kwamathambo) ukuze baqinise ukuvezwa kwemisipha. Umthamo wendawo yonke ukwanda kancane, lokhu kwenzeka njengomphumela omkhulu ukulahlekelwa kwamafutha.
Imiphumela emibi ngesikhathi nangemva kwenkambo ingacatshangwa, ngokuvamile ivuselelwa.
Le nkambo iphikisana nabantu abanesifo sikashukela (i-hormone yokukhula yandisa inani le-glucose egazini), ukuqaphela kufanele kusetshenziswe ekugulweni kokweqile (ukuvama komuntu wesimondi kungakhuphula). Ngaphambi kokusebenzisa lesi sidakamizwa kufanele uxoxe nodokotela.
I-HGH ephezulu ye-XGH e-Thailand